Ciidamo Tiro Badan Oo Lagu Daad Gureeyey Deegaano hoos Yimaada Degmada Ceel-afwayn Iyo Xaalada Guud Ee Deegaanada | Saxil News Network
Ciidamo Tiro Badan Oo Lagu Daad Gureeyey Deegaano hoos Yimaada Degmada Ceel-afwayn Iyo Xaalada Guud Ee Deegaanada
Hargeysa(Saxilnews)Wararka saaka naga soo gaadhaya magaalada Ceel-afwayn ee gobolka Sanaag ayaa sheegaya in ciidamo tiro badan lagu daadiyey deegaano hoos yimaada degmada Ceel-afwayn ee gobolka Sanaag.
Ciidamadan oo iskugu jira sida naloo sheegay ciidamada Milateriga,RRU-da iyo Booliska ayaa waxa ay labadii habeen ee u danbeeyey ay aad u sugayeen amaanka guud ee deegaanada oo laga casbi qabo in ay xaalad kale oo colaadeed ka cusboonaato.
Deegaanada si xooga ah loogu daad gureeyey ciidamada ayaa kala deegaanada Dararwayne,Ceel-midgaan iyo Fadhigaab iyada oo sidoo kalena ciidamada ugu tirada badan ay ku sugan yihiin degmada Ceel-afwayn kuwaas oo si aada u adkeeyey amaanka.
Wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in ciidamadu ay deegaanadaasi kasoo qab-qabteen dad badan oo ay uga shakiyeen xaalad abuur iyo waliba kuwo ay xaalad amni ahaan u qab-qabteen,waxaana dadka ay ciidamadu soo qabteen kamid ah maayarkii hore ee degmada Ceel-afwayn.
Xaaladda guud ee degmada Ceel-afwayn iyo deegaanada hoos yimaada ayaa wakhti xaadirkan ah mid degan iyada oo ay deegaanadaasina tageen cuqaal iyo madax-dhaqameed kala duwan oo u socda sidii ay usoo xalin lahaayeen isla markaana nabad u kala dhex dhigi lahaayeen Afar beelood oo dhawaan diriri ku dhex martay deegaanada Ceel-afwayn oo ka tirsan gobolka Sanaag iyo deegaanada Dharkayn Geenyo oo ka tirsan gobolka Sool.
Sidoo kalena wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Yaasiin Maxamuud Xiir “Faratoon” ayaa isagu Shalay safar ugu baxay gobolada bariga Somaliland isaga oo wakhti xaadirkan ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool,ujeedada socdaalkiisa ayaa ah nabadaynta labada beelood ee colaadu ku dhex marayso deegaanada Koonfurta gobolka Sool waxaana sidaas Ramaasnews u xaqiijiyey Afhayeenka wasaaradda Arrimaha gudaha Somaliland Jamaal Muxumed Cabdi.
Ilaa hadda lama garan karo halka ay sal dhigan doonto colaadaha kasoo cusboonaaday deegaanada gobolada Bariga Somaliland oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh,taas oo ilaa hadda xalinteeda lagu gudajiro.